Global Voices teny Malagasy · 6 Aogositra 2010
06 Aogositra 2010
Novambra 2021 46 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 06 Aogositra 2010
Serbia: Mpanao gazety iray nisy nanafika tanaty zotra fitateram-bahoaka
Eoropa Afovoany & Atsinanana06 Aogositra 2010
Nisy namono teny ambony fiarakodia lehibe iray mpitatitra olona i Teofil Pancic, mpanao gazety fanta-daza iray teratany Serba tamin'ny asabotsy. Manazava ny fihetsiky ny mponina amin'ny aterineto Serbiana sasany momba izany i Sinisa Boljanovic.
Pakistan: Mitombo ny hatezerana manoloana ny tsy firaharahàn'ny Filoha
Azia Atsimo06 Aogositra 2010
Mihoatra ny 1500 ny maty taorian'ireny oram-be nisesisesy ireny ka niafara tamina tondra-drano mihitsy tany amin'ireo faritra samihafa tany Pakistana. Anarivony ireo nanjary tsy manan-kialofana ary ny maro hafa kosa mandositra ny hanoanana sy ny fahafatesana.
Slovakia: Hampandoa vola ny vaovao an-tserasera tahaka ny TV Cablée ve?
Slovakia06 Aogositra 2010
Miova tokoa ny andro. Eny fa na any Shina aza ankehitriny nisy ny olona, taona vitsivitsy lasa izay, no nihomehy raha nilazana fa handoavam-bola ny mankany an-trano fidiovana, ary, iza no mahalala, fa angamba heverin'ny taranaka manaraka fa tsy iadian-kevitra izany mandoa vola ijerem-baovao amin'ny aterineto izany. Mety ho efa...
Blackberry misedra tsindry any amin'ny Golfa sy India noho ny ‘code’ fanafenana [Encryption code]
Ny ’ Sampan-draharaha Mpandrindra ny Fifandraisan-davitra [Telecommunications Regulation Authority (TRA)] any amin'ny Emira Arabo Mitambatra sy ny Kaomisiona Saodiana misahana ny Teknolojian'ny Fampitam-baovao sy Fifandraisan-davitra [Communications and Information Technology Commission (CITC)] dia nanambara, ny 1 Aogositra ho an'ny voalohany ary ny 5 Aogositra 2010 ho an'itsy faharoa, fa hosakanan'izy ireo...